Home Wararka Dibada Madaxwaynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa sheegay in dalkiisu
Madaxwaynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa sheegay in dalkiisu
Madaxwaynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu u adkaysan doono dadaalka reer galbeedka ee cunaqabataynta dhaqaale ee dalkiisa lagu soo rogay.
“Waan adagnahay, waana u adkeysan karnaa caqabad kasta, waan xallin doonaa dhibaato kasta; taariikhdeenna kun-sano ayaa iska hadlaysa,” ayuu u sheegay shir-madaxeedka dhaqaalaha ee St. Petersburg shalay.
Waxa uu xasuusiyay in Putin uu ka dalbaday Maraykanka in uu dammaanad qaado in Ukraine aysan ku biiri doonin NATO ka hor inta uusan amrin howlgal militari oo gaar ah oo laga fuliyo Ukraine dabayaaqadii bishii February.
“Ruushka waxaa lagu qasbay in uu bilaabo howlgal milatari oo gaar ah sababtoo ah hanjabaadaha sii kordhaya ee naga dhanka ah,” ayuu yiri Putin.
Madashii shalay, shirkadaha Ruushka ayaa loogu baaqay inay kordhiyaan maal-gashigooda gudaha si loo xaqiijiyo “awoodda weyn” ee waddanku leeyahay, loogana hortago dadaalka reer galbeedka ee lagu wiiqayo dhaqaalaha Ruushka,
Previous articleWasiir ugu shaqada Badan DG Hir-Shabeelle Mudane Daqare ayaa Xafiiskiisa Wasaarada Maanta kula kulmay Wafdi kasocoday Wasaaradaha DF
Next articleHay’adda Duulista Rayidka oo war ka soo saartay waraaqaddo laggu baahiyay social media-ha.
Madaxweynaha Deni, ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay ciidanka...